तपाईंको छोड्ने योजना बनाउनुहोस् - 802०२ क्विट्स
घर » Vermonters » म छोड्न चाहन्छु » तपाईंको छोड्ने योजना बनाउनुहोस्
तपाइँको योजना बनाउनुहोस्
सफलतापूर्वक सुर्ती छोड्ने सम्भावनाहरू उत्तम हुन्छ जब तपाईं अनुकूलित छोड्ने योजना गर्नुहुन्छ।
धूम्रपान, भाप वा अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ छोड्न उत्तम तरिका के हो? छोड्ने कुनै एकल सही तरीका छैन। यदि तपाईंले विगतमा एउटा मार्ग प्रयास गर्नुभयो र यसले काम गरेन भने, अर्को प्रयास गर्न विचार गर्नुहोस्। हामी तपाइँको व्यक्तिगत छोड्ने योजना बनाउने र प्रयोग गर्ने तरिकाहरूमा हिंड्नेछौं।
स्टार्टहरू अहिले नै छोड्दै।
त्याग्नु गाह्रो छ, तर
तपाईको सफलतालाई बढावा दिन्छ। तपाईंको व्यक्तिगत छोड्ने योजना प्राप्त गर्न6सजिलो चरणहरू पूरा गर्नुहोस्। तलका चरणहरू अनुसरण गरेर तपाईंको आफ्नै छोड्ने योजना सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, प्रिन्ट गर्न र तपाईंको अनलाइन क्यालेन्डरमा तपाईंको बन्द योजना।
तपाइँको क्विट मिति सेट गर्नुहोस्
तपाइँको अन्त्य मिति सेट गरेर शुरू गर्नुहोस्
अर्को दुई हप्ता भित्र एक दिन छनौट गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई तयारी गर्न पर्याप्त समय दिनेछ।
मेरो क्विट मिति
निकोटीन तपाईंको प्रणाली बाहिर छ।
शारीरिक फिर्ता लक्षणहरू फीका।
भावनात्मक र ब्यबहार ट्रिगरबाट बकवास जारी हुन सक्छ।
तपाइँको तर्क छिटो छान्नुहोस्
सिगरेट, इलेक्ट्रोनिक चुरोट (ई-सिगरेट) वा अन्य प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग छोड्ने धेरै कारणहरू छन्। ती सबै राम्रा छन्। तपाईंको कारण चयन गर्नुहोस्। तिनीहरू तपाईंको अनुकूलित "मेरो छोड्ने योजना" मा थपिनेछ।
राम्रो गन्ध छ
तपाइँका ट्रिगरहरूको पहिचान गर्नुहोस्
तपाईका ट्रिगरहरू चिन्नेले तपाईंलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्दछ। जब तपाईं पहिलो छोड्नुहुन्छ, तपाईं पूर्ण रूपमा ट्रिगरहरू बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। केही समयको लागि सुर्तीजन्य रहित पछि, तपाईं आफ्नो ट्रिगरहरू ह्यान्डल गर्न अन्य तरिकाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। ट्रिगरहरू छान्नुहोस् जुन तपाईंलाई सुर्तीजन्य प्रयोगको लागि कारण गर्दछ। ती तपाईंको निजीकृत "मेरो छोड्ने योजना" मा जोडिनेछ।
लडाई पछि शान्त
कफी पिइरहेको छ
एक काम ब्रेक लिदै
एक सामाजिक घटना मा जाँदै
अरू कसैले धुम्रपान गरेको देखेर
लडाई पास गर्न तैयार गर्नुहोस्
Cravings केवल केहि मिनेट को लागी minutes तर ती मिनेटहरु overpowering हुन सक्छ। तपाईंसँग भएको साधारणतयाका प्रकारहरू चयन गर्नुहोस्। यी लालसाहरूलाई पिट्नका लागि सुझावहरू तपाईंको अनुकूलित "मेरो छोड्नुहोस् योजना" मा थपिनेछ।
के तपाईंले आफ्नो हात र मुख व्यस्त राख्न आवश्यक छ?
तपाईंको हातमा पराल समात्नुहोस् र यसमा सास फेर्नुहोस्।
तपाईंको हात व्यस्त राख्न सिक्का वा पेपरक्लिपसँग खेल्नुहोस्।
तपाईं तनाव कम गर्न वा आफ्नो मुड सुधार गर्न को लागी तंबाकू प्रयोग गर्नुहुन्छ?
शान्त हुनको लागि लामो सास फेर्ने अभ्यास गर्नुहोस् वा स्टीम उडाउन केही पुशअपहरू गर्नुहोस्।
साथीहरू, परिवार, र सल्लाहकारहरू पाउँनुहोस् जब तपाईंलाई कसैसँग कुरा गर्न आवश्यक पर्दछ।
के तपाईंलाई व्यस्त रहन र तपाईंको दिमाग कब्जा गर्न समस्या छ?
कामहरूको सूचि बनाउनुहोस् जुन तपाईं पूरा गर्न सक्नुहुन्छ जब एक लालसा हिट हुन्छ। यस सूचीले chores, ईमेललाई जवाफ दिईरहेको छ, ईरान्डहरू चलिरहेको छ, वा अर्को दिनको लागि तपाईंको तालिका योजना गर्दै।
के तपाईं चुरोट र चिन्तित बिना चिन्ता गर्नुहुन्छ?
निकोटाइन रिप्लेसमेन्ट थेरापी (NRT), जस्तै प्याच, गम, वा lozenges, तपाइँको फिर्ती लक्षण राहत। तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् कि कुन प्रकारको NRT तपाईका लागि सहि छ।
तपाईं एक ऊर्जा बढावा को लागी धूम्रपान को उपयोग गर्नुहुन्छ?
तपाईको उर्जा स्तर स्थिर राख्न, नियमित व्यायाम पाउनुहोस् र दिनभर स्वस्थ स्नैक्स गर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं रातको धेरै निद्रा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंलाई दिनको सुस्त महसुसबाट बचाउन।
के तपाईं सुर्तीजन्य प्रयोग गर्नुहुन्छ किनकि यो सुखद र आरामदायक छ?
एक फरक आनन्दको लागि आफैलाई उपचार गर्नुहोस्। आफ्नो मनपर्ने गीतहरू सुन्नुहोस्, साथीहरूको साथ चलचित्रको रातको योजना बनाउनुहोस् वा तपाईंको सिगरेट, ई-सिगरेट, खुवाउने तम्बाउ वा सुन्फ पैसालाई विशेष उपचारको लागि बचत गर्नुहोस् जब तपाईं सुर्तीजन्य रहित माइलस्टोनमा पुग्नुहुन्छ।
टोबको रिमाइन्डरहरूको छुटकारा पाउनुहोस्
सुर्तीजन्यको रिमाइन्डरहरू हेरेर धूम्रपान रहन गाह्रो हुन्छ। तपाईंको बिदा दिन अघि तपाईंको घर, कार र कार्यस्थलमा कुनै रिमाइन्डरहरू हटाउनुहोस्। तल साधारण रिमाइन्डरहरूको सूची र उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिईएको छ। यो सूची तपाईंको अनुकूलित "मेरो बन्द योजना" मा थपिने छ।
तपाईंको लुगा धुनुहोस्, विशेष गरी ज्याकेट तपाईंले धुम्रपानको ब्रेक लिन लगाउनुहुन्छ।
तपाईंको कार सफा गर्नुहोस्।
म्याचहरू, एस्ट्रियाहरू, र कुनै घरको घर बाहिर हुन सक्ने कुनै पनि सिगरेट नितोबाट छुटकारा पाउनुहोस्
तपाईंले सिगरेट, एस्ट्राइज, खेलहरू, र लाइटरहरू राख्नु भएको ठाउँमा तान्न सजिलो सामानहरू राख्नुहोस् जस्तै स्ट्रु, निकोटीन गम, वा कामको सूचि।
अतिरिक्त मद्दतको साथ छोड्नुहोस्
802०२quits.org सँग छोड्ने कामलाई सजिलो बनाउन धेरै उपकरणहरू छन्। यी स्रोतहरू अन्वेषण गर्नुहोस् र तपाईंलाई रुचि राख्नेहरू छनौट गर्नुहोस्। ती तपाईंको व्यक्तिगत "मेरो छोड्ने योजना" मा थपिने छन् कसरी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने जानकारीको साथ।
कल गर्नुहोस् १-1००-क्विट-अब एक मा एक कोचिंग को साथ नि: शुल्क अनुरूप छोड्ने मद्दत को लागी। ईमेल र पाठको माध्यमबाट अतिरिक्त समर्थनको साथ क्विटलाइन कोचहरू २//24 उपलब्ध छन्। नि: शुल्क प्याच, गम र lozenges समावेश गर्दछ।
भर्मन्ट क्विट पार्टनरहरू साना समूह पियर समर्थनको साथ अन्त्य गर्न मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्। To देखि weeks हप्ताको साप्ताहिक बैठकहरू राज्यभरि उपलब्ध छन्। नि: शुल्क प्याच, गम र lozenges समावेश गर्दछ।
802०२quits.org मा, अनलाईन उपकरणहरू र सन्देश बोर्डहरू जस्तो संसाधनको मद्दतबाट तपाईंको आफ्नैमा रोक्नुहोस्। नि: शुल्क प्याच, गम र lozenges समावेश गर्दछ।
औषधी र / वा निकोटीन प्रतिस्थापन थेरापी (NRT) को उपयोग गर्नाले राम्रोको लागि छोड्ने सम्भावनालाई सुधार गर्न सक्दछ। तपाईका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् कि तपाईका लागि कुन विकल्पहरू उत्तम छन्।
साथी र परिवारलाई भन्नुहोस्।
धूम्रपान छोड्न सजिलो हुन्छ जब तपाईंसँग आफ्नो प्रियजनहरूको समर्थन छ।
सामग्री राष्ट्रिय क्यान्सर संस्थान र स्मोक्फ्री.gov बाट अनुमतिसँग अनुकूलित गरियो